kubudikidza KC Morgan
Munoziva hausi woga munhu obsessively anotsvaka misi avo evanhu vezvenhau nzvimbo uye kutsvaka injini mukuedza kuchera kukwira tsvina, rudyi? Unoziva chii ako Internet chavangayeukwa ari pamusoro penyu zvaunokwanisa ukama?
Just vangani tsvuku Mireza Zvingaita here kurera neshamwari dzako uye vateveri mazita? Pamwe kupfuura munofunga. Chimwe chezvinhu pindika zvidimbu mashoko pamusoro penyu, kanenge kana totaura Indaneti, ndiye shamwari dzako dziri. Anotarisirwa misi zvaigona akatarira nevamachinjana nokuita mamwe maonero akanaka simba.
Kana ukatarira kuburikidza mazita shamwari nokukurumidza, mumwe rwamashoko kuchaita nyura pakarepo: nhamba varume nevakadzi pachikwata. Vakadzi vane mijenya shamwari dzechirume kunogona kutyisa kuti zvinogona misi. Vari kuenda kunetseka uyo vakomana ava vose, chii ukama, uye zvichida sokuti pangozi. Chete inoenda vakadzi vari vachiongorora varume pamusoro evanhu vezvenhau. Pavanoona yakawanda nevakadzi pachikwata, Ivo uchazova kuziva uye zvikuru vakangwarira.
The Info You Pachena
Social vezvenhau inzira yakanaka kuramba vachikurukurirana uye anobatana hunhu zvinokunakidzai angangoita, asi zvakare akazara hot-bhatani yenyaya. Vanhu vakawanda vanoshandisa munzanga vezvenhau nzvimbo kutevera enyika uye magariro zvinokonzera kuti zvinokosha kwavari. Vamwe kunyange kurishandisa somunhu soapbox kuti tout hwechipfuwo zvavanofarira. Strong pfungwa inogona chaizvo kure-vachikanda zvinogona misi, ndiani murege timuonge ose nyaya.
Hazvina akakodzera kuwana munhu wokuroorana naye inobvumirana newe chete nyaya dzose, uye nguva dzose zviri nani kuramba kunyatsowana. Kana iwe kunotutirwa waanoda kuroorana naye vako political zvido, iwe chingava achivatsausa kure uye achiadzinga pamberi penyu kunyange une mukana kuwana pamunowirirana.
The vaviri zvawave kudanana vhiki, uye zvichaita zvakanaka. Asi usati comb they kuburikidza neshamwari dzavo mazita uye kunotutirwa zvose vomumhuri dzavo neshamwari zvikumbiro, mira uye funga. Hazvina kukodzera shamwari vanun'una vavo, vabereki uye chikoro kumadhindindi kutoti iwe zvakajeka kukumbira mvumo yokuita kudaro.
Ita izvozvo shure wako musana kana pasina chibvumirano kwavo, uye unogona vanodzamara akatarira somunhu stalker. Kunyange kana vavariro dzako zvachose mhosva, zviri kuenda kutarisa kufungira kana pakarepo uri friending zvose shamwari dzavo. Vomunhu wauri kufambidzana naye uchanzwa kuti uri kuedza kuchengeta Tabs pamusoro pavo, uye izvi aigona kumutsa zvemarudzi ose chivimbo nyaya.
Imi dieted yechando zvose uye zvino kutarisa zvinoshamisa kuti itsva swimsuit ... asi hazvirevi unofanira udzawo nenyika. Penhumbi imi kubudisa mapikicha enyu vanogona kupa kubvisa pfungwa isiri pamusoro hworudzii munhu uri. Kushamisira yakawanda ganda, uye zvaunokwanisa mumwe aigona kuva godo. Vaigona kuzotadza kuremekedza iwe. Vaigona kunyange kuratidza mapikicha enyu vamwe vanhu, kana apiwa muzviparidze uye kugoverana navo munyika, kana imi makasarudza chete kuudza pics aine vashomanana.
Kamwe ukaisa chinhu paIndaneti, munhu anogona kuwana nayo uye vose vachange kuumba maonero nezvazvo. Yeuka kuti usati kushamisira kuti swimsuit pena.
The Nokwawakarerekera Game
Chenjerai sei iwe mupe uri pasocial vezvenhau dzinonyadzisira. Haudi kuzarurira rakawandisa. Kuti goofy mufananidzo wenyu kuti munoda apo uri wapfuura panhoo anogona ugomutsa Ndangariro zvikuru iwe, asi kwenguva zvinogona zuva kunogona guru dzvuku mureza. Haungazombofi kuwana mukana wokuti atsanangure kuti maitiro akadaro zvakanaka kare.
Ratidza unhu hwako paIndaneti, asi kuratidza yakasvinwa shanduro. Unoda kuwana munhu wokuroorana naye anokuda nokuti ndiani chaizvo, uye uchava nemikana yakawanda kuzivisa akaturikidzana dzenyu zhinji. Haufaniri kumhanya kuratidza zvose zvabatanidzwa dzako kure paIndaneti.